Fifindràmonina · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Fifindràmonina
Tsiaron'ny fandosiran'ilay zazavavikely Tiorkmenistana iray nitady fampianarana
Azia Afovoany sy Kaokazy3 herinandro izay
Ny misterin'ny niandohan'ny anaran'ny tanàna Armenia tao Kôlômbia
Amerika Latina08 Avrily 2022
Blaogera iray any Odessa mitondra feo hafa amin'ny fitantarana Shinoa momba an'i Okraina
Eoropa Afovoany & Atsinanana28 Marsa 2022
Tantara mikasika ny Fifindràmonina
Hatramin'ny nakàn'ireo Talibàna azy tamin'ny Aogositra 2021, nikasa ny hiaro ny sisintanin-dry zareo amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny diplaomasia, indrindra fa miantehitra amin'ny hetsika Rosiana, ireo fanjakàna telo ao Azia Afovoany.
Azia Atsinanana 27 Marsa 2022
Any Hong Kong, noho ny fandàvana tsy hanome "visa" azy sy taorian'ny naha-vaotily azy ho mitondra ny COVID-19, lasa mipetraka eny amoron'arabe ny vehivavy Filipiàna iray 35 taona.
Mpianatra Turkmen: Nandositra an'i Okraina rotidrotiky ny ady
Azia Afovoany sy Kaokazy 16 Marsa 2022
Nandritra ny andro vitsivitsy voalohany tamin'ny ady nataon'i Rosia tamin'i Okraina, tena tsy nisy ny fanampian’ny masoivohon'i Turkmen tamin'ny famindra-toerana ireo mpianatra sy ny olom-pirenena.
Miangona eo amin'ny sisintany any Moldavia, Slovakia, Polonina ireo mpitsoa-ponenana Okrainiana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 04 Marsa 2022
"Tamin'ny dimy ora maraina, niantso anay ny namana nilaza taminay fa misy ny ady izao. Nangoninay ny entanay ary lasa izahay nandeha."
Fiainana ampielezana: Tantaran'ny Nepaley mpiasa iray nifindra monina tany Qatar
Azia Atsimo 09 Febroary 2022
"Izany no niainanay. Ireo mangina no tadiaviny. Ireo izay azo ampanginina." Fitantaran'ny Nepaly iray niondrana andafy hiasa niverina nody rehefa nandany telo volana tao Qatar.
Nizeriana an'arivony no nandray anjara fanangonan-tsonia hanavaozana ny IELTS
Afrika Mainty 03 Febroary 2022
Zanatanin’i Fanjakana Britanika teo aloha i Nizeria, ny teny anglisy no teny ifampiresahana ao aminy sady fiteny enti-mampianatra any an-tsekoly. Tsy afa-miala amin’ny fanadinana IELTS, fitsapam-pahaizana amin’ny fahaizana miteny anglisy, anefa i Nizeria, .
Omicron : Mihevitra hiverina hitoka-monina indray i Japàna
Azia Atsinanana 29 Desambra 2021
Vokatry ny fahitàna ilay karazany vaovao amin'ny COVID-19, nandraman'ny governemanta japôney ny nanidy tanteraka nandritra ny fotoana fohy ny sisintaniny, habakabaka sy ranomasina.